Akụkọ - Otu esi ezere ụdị ihe egwu egwu bulldozer gnaw track
Otu esi ezere ụdị ihe egwu egwu bulldozer gnaw track
Usoro ije nke bulldozer crawler bụ nke mejupụtara idler, rola rola, roller track, omee, njikọ njikọ, ngwaọrụ mkpaghari, eriri na ihe ndị ọzọ. Isi ọrụ ya bụ ịkwado oke ahụ, belata mmetụta na ịma jijiji nke elu ụzọ na -adịghị ahụkebe na bulldozer, ma gbanwee nrụpụta ike nke injin ahụ ka ọ bụrụ ike traction. wheel, sprocket na -akwado, wiil na -akwado ya na onye na -akwọ ụgbọ mmiri, ya bụ, ihe atụ nke ịta egwu ahụ, nke na -emetụta ọ bụghị naanị ịrụ ọrụ bulldozer, kamakwa ọ na -ebelata ndụ ọrụ nke akụkụ ndị a.
Nsogbu nke igwu egwu site na bulldozer crawler bụ nsogbu siri ike na-emetụta ogo ngwaahịa, nke edozichabeghị nke ọma ruo ogologo oge. nsogbu nke '' igwu egwu '' maka nyocha. Anyị na-eche na ihe kpatara egwu gnawing nke bulldozer crawler na-adịkarị na ntachi obi nke ịgbado ọkụ na ịkpụpụta okpokoro na mgbakọ nke "rollers anọ" (onye na-abaghị uru, onye na-ebu ụgbọ ala, onye na-agba egwu). Ntụle a kapịrị ọnụ na -enye, yana usoro ndị a tụrụ aro ya.
Mgbe bulldozer crawler tụgharịrị na ala apịtị, ọdịda ọdịda ma ọ bụ ịta egwu ahụ na -emekarị, nke na -emetụta iji igwe eme ihe, na -ebute mwepu na mbụ nke akụkụ nke usoro ije ma na -ebelata ndụ. Site na nyocha ike na usoro mmezi, anyị na -eche na mmegharị ezi uche nwere ike idozi nsogbu a nke ọma. A ga -enyocha okpokolo ọkụ na ngwaọrụ na -ejegharị ejegharị oge niile iji zere nrụrụ nke etiti nke eji eme ihe na -adịghị mma yana ihe ndị ọzọ, wee belata gnawing track na ihe na -adịghị mma nke onye na -eme njem.
Oge ezipụ: Aug-09-2021
Ndị na -agba egwu Rubber Track, Ike kpọchie, Onye na -egwu ihe na -agba bọket, Ihe mkpuchi ihe mkpuchi ịwụ, Iburu Track ala, Bit ejedebela ugboro abụọ,